Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Aeroflot chọrọ ka enye ndị ọkwọ ụgbọelu ọgwụ mgbochi
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọkwọ ụgbọ elu Aeroflot isii jụrụ COVID-19 jabs, kwụsịtụrụ na-akwụghị ụgwọ
Ndị ọkwọ ụgbọ elu isii na-arụ ọrụ maka ụgbọ elu mba ụwa nke Russia abatala ma kwụsịtụrụ n'ọrụ n'okpuru iwu na-enye ohere ka ụlọ ọrụ chụọ ndị ọrụ jụrụ ajụ maka ọgwụ mgbochi megide nje COVID-19.
Aeroflot kwụsịtụrụ ndị ọkwọ ụgbọ elu maka ịjụ jabs COVID-19.
Ndị ọkwọ ụgbọ elu a kwụsịtụrụ jụrụ ịdebanye aha maka ọgwụ mgbochi coronavirus.
Ndị otu ndị ọkwọ ụgbọ ala kpesara onye isi ụlọ ọrụ Aeroflot, na -akpọ nkwụsịtụ ịkpa oke.
Ụgbọ elu flagship nke Russia Aeroflot, nke steeti Russia nwere nke ukwuu, zigara ndị ọkwọ ụgbọ elu isii na-anaghị agba ọgwụ mgbochi na ezumike akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ezumike na-akwụghị ụgwọ, onye na-ekwuchitere ụgbọelu ahụ kwuru.
Ọnụ na-ekwuchitere ya Aeroflot kwuru na etinyela ndị ọkwọ ụgbọelu isii ezumike ezumike ọrịa, na -akwụghị ụgwọ, n'ihi na ha ahọrọla ịnata mgba. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ndị ọkwọ ụgbọ elu kwụsịtụrụ bụ obere ihe ma e jiri ya tụnyere nha nke ndị ọrụ Aeroflot, yana ndị ọkwọ ụgbọ elu 2,300 nọ na ọdụ ụgbọ elu ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị otu ndị ọkwọ ụgbọ elu mere mkpesa maka onye isi ụlọ ọrụ Aeroflot Mikhail Poluboyarinov maka ịkpa oke, na -arụ ụka na ndị na -eje ozi ụgbọ elu na -enweghị ọgwụ mgbochi na ndị ọrụ nkwado teknụzụ anaghị enwe ụdị nchụpụ a.
Igor Delduzhov, Onye isi ala Sheremetyevo Trade Union of Flight Personnel, nke hiwere isi n'ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu Moscow, Aeroflot akatọọla mkpebi wepụrụ ndị ọrụ ụgbọ elu ahụ. Dị ka ya si kwuo, mmeghachi omume siri ike nye ndị na -ahọrọ ịghara ịgba ọgwụ mgbochi adịghị mma, ebe ọ bụ na ihe dị ka pasent 84 nke ndị ọrụ ekwuola na ha agbaala ọgwụ mgbochi.
Deldyuzhov kwuru n'akwụkwọ ozi na webụsaịtị otu ndị otu ahụ, "Ọ nweghị ụgbọ elu Russia ọzọ nwere ụdị nkwụsị a.